गणतन्त्रका १२ वर्षः दलित अगुवा भन्छन्, ‘उत्साह निराशामा परिणत हुँदैछ’ - Everest Dainik - News from Nepal
गणतन्त्रका १२ वर्षः दलित अगुवा भन्छन्, ‘उत्साह निराशामा परिणत हुँदैछ’
काठमाडौंः गणतन्त्र स्थापनापछिको उत्साह निराशामा परिणत हुँदै गएको दलित अगुवाहरूले बताएका छन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि देश जातिय छुवाछुतमुक्त भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, जातिय छुवाछुतमा संलग्नलाई कारवाही नहुनु, दलित नेतालाई दलित नेताका रुपमा मात्रै हेरिनुलगायतका कारणले दलित समूदायमा निराशा छाएको उनीहरूको आरोप छ ।
१२औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा एभरेष्ट दैनिकसँग कुरा गर्दै दलित अगुवा गणेश विकले अहिले दलित समूदायले सन्तोष हुनपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘७० वर्षको आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पछाडि पारिएको दलित समूदाय अगाडि आउँछ भन्ने उत्साह थियो, त्यसमा क्रमश निराशा छाउँदैछ ।’
गणतन्त्रअघि जातिय भेदभावका कारण कुनै पनि दलितले ज्यान गुमाउनु नपरेको स्मरण गर्दै उनले गणतन्त्रपछि जातिय छुवाछुतकै कारण १८ जना दलित समूदायका मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ सुनाए ।
त्यसमा पनि न्याय नपाउँदा दलित समूदाय झनै असन्तुष्ट बनेको छ । ‘गणतन्त्रपछि जातिय छुवाछुतकै कारण १८ जना दलित समूदायका मानिसले अकालमै ज्यान गुमाए । तीमध्य सुर्खेतका सेत दमाईबाहेकले न्याय पाउन सकेका छैनन’, उनले गुनासो गर्दै अगाडि भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्दा पनि राजनीतिक दवाब आउँछ । नारा, जुलुसदेखि धर्ना नदिएसम्म दलितमाथि भएका अन्यायको विरुद्व प्रहरी–प्रशासनमा मुद्दा दर्ता हुँदैन ।’
गणतन्त्रका १२ वर्षमा के पाए दलितले ?
गणतन्त्रपछिको अवधिमा दलित समूदायका समस्या समाधानका लागि कुनै योजना निर्णय गरिएनन् । अन्य अभियानका लागि वार्षिक करौडौंं रुपैयाँ छुट्याइन्छ । तर, दलित अगुवा विकले प्रश्न गर्दै भने, ‘जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना खै ? बजेट खै ?’ सरकारले जातिय छुवाछुतमुक्त गरेपनि कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा जातिय भेदभाव समाजबाट हट्न नसकेको उनको जिकिर छ ।
उनी आक्रोस पोख्दै भन्छन्, ‘दलित नेतालाई दलित नेताका रुपमा मात्रै विकास गर्ने परिपाटी भयो । तर, दलित समूदायका नेताहरू दलित समूदायका मात्रै हैन, सबैका नेता हुन चाहन्छन् ।’
‘गणतन्त्रअघि पार्टी नेता भन्थे, अहिले आएर दलित नेता भन्ने गरिएको छ । यो दलित समूदायका मानिसलाई अगाडि बढ्न नदिने खेल हो’, उनले भन्छन्, ‘दलित पनि राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा हुन्छ भन्ने नेतृत्वले बुझेका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’
दलित अगुवा गणेश विक ।
दलित समूदायबाट केही व्यक्ति पदमा पुगेको भएपनि निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्न नसकेको उनको ठम्याई छ । केही व्यक्तिलाई टिपेर पदमा पुर्याउने प्रवृतिको विरोध गर्दै उनी भन्छन्, ‘आर्शिवाद पाएर पदमा त केही व्यक्ति पुगेका छन् तर उनीहरू निर्णय गर्ने हैसियतमा छैनन । त्यसका कारण पनि दलित समूदायका मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छैनन ।’
उनी भन्छन् ‘अझै पनि दलितलाई ‘दयाको भीक दिने हो’ भन्ने मानसिकता कायमै छ ।’
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित अन्तरजातीय विवाहको सिलसिलामा कुटपिट गरी हत्या गरेको घटनालाई विक ‘अहिलेसम्मकै कलङक’का रुपमा अथ्र्याउँछन् ।
चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँमा जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नवराज विश्वकर्मा तथा उनका साथमा गएका युवाको समूहमाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए । नवराजसहित तीन जनाको शव फेला परेको छ भने चार जना अझै बेपत्ता छन् ।
उक्त घटनामा वर्तमान नेकपा नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘उक्त घटनामा समाज, संस्कृतिलाई दोष लगाएर हुँदैन । यसलाई विकृतिका रुपमा लिनुपर्छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै यस्ता घटनामा कमि आउँन सक्छ’, उनले कुराकानी टुङ्ग्याउँदै भने ।
ट्याग्स: १२औं गणतन्त्र दिवस, गणेश विक